> Resource> iTunes> Olee otú iji Wụt Song Lyrics maka iTunes na iPod
Mgbe mmadụ na-ege ntị a song, ọ ga na-emekarị na-abụ abụ na lyrics ọ dị mkpa. Otú ọ dị, lyrics bụ otu n'ime efu atụmatụ niile nsụgharị nke iTunes. Ee, ọ bụ aka nri, na i nwere ike dezie lyrics site Get Info item, ma olee otú ị pụrụ egosipụta ya, bụ tricky akụkụ. Ọ pụtara na ị ga-eche maka Apple iji kwalite iTunes maka a ọzọ dị ike lyric atụmatụ? Ọ bụghị n'ezie! Isiokwu a ga-egosi gị otú ị pụrụ egosipụta song lyrics gị iTunes na iPod.
Atụ aro Software:
TidyMyMusic na-akpaghị aka nyochara na ọcha gị music n'ọbá akwụkwọ na otu Pịa. I nwekwara ike iji aka ịkpado gị music, ịgbanwe album cover nkà, ihichapụ duplicates, ma ọ bụ wepu efu tracks. Gị music collection ugbu a mara mma haziri. Mụtakwuo >>
Wụt Lyrics maka iTunes
Na-egosipụta lyrics na gị iTunes, e nwere ụfọdụ dị nkwụnye na ime nke a. Otu n'ime ha bụ iTunes visualizer, a Cover Version nke na-egosiputa na album cover artwork nke ugbu a na-akpọ song nakwa dị ka lyric ma ọ bụrụ na e nwere. The lyrics nke track ga-egosipụta n'elu nke album cover artwork, mgbe artist aha na music aha ga-etinye na ala (dị nnọọ ka e gosiri na screenshot n'okpuru).
Cover Version bụ ma dị maka Windows na Mac. Ị nwere ike ibudata ya ebe a. Ọ dị mfe iji wụnye, dị nnọọ etinye CoverVersion (CoverVersion.dll) na Library> iTunes> iTunes Ikwunye-ins nke ebe obibi gị ndekọ na Mac. Alternatively ịkpali ha n'ime nkwụnye ins nchekwa n'okpuru iTunes echichi nchekwa na Windows. Na-ele lyrics na iTunes, na-aga ele> Visualizer> CoverVersion.
Rịba ama: Cover Version adịghị ozi kpọtara lyrics ma ọ bụ audio na Ịntanetị. Ọ na-egosiputa lyrics nke e agbakwunyere na audio track. Ọ bụrụ na ị na-amasị ikuru na lyrics online, i nwere ike ịnwale iTunes Lyrics mbubata.
View Lyric Iji aka
iTunes-enye gị ohere na-ele lyrics aka. Dị nnọọ mma-pịa na kpọmkwem song na iTunes na họrọ Get Info (keyboard shortcut bụ Wụk + m). Mgbe ahụ, na-aga Lyrics taabụ na-ele lyrics.
Ele Lyrics on iPod
Ị nwekwara ike inwe mmasị ị na-elele lyrics na gị iPod. N'ezie, ọ bụ dịkwa nnọọ mfe ka ogologo oge gị songs nwetara na lyrics agbakwunyere. Mgbe a na-edegharị songs gị iPod, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
1. ịmalite ịkpọ egwu ọ bụla song nke ị na kwukwara lyrics.
2. See Center button ugboro ugboro ruo mgbe ị na-ahụ lyric on iPod.
Ebe a bụ iji nke nhọrọ mgbe ị pịa Center button bụrụ na e nwere album nkà ma ọ bụ lyrics:
Play ọnọdụ> Scrubber> Album Art> Lyrics / Description> Rating
Nke a bụ ọnọdụ maka songs na-enweghị album na nkà na lyric data.
Play ọnọdụ> Scrubber> Rating
Otú ịgbanwe ID3 Tag n'ihi na gị MP3 Files na ala
Olee otú Tinye ID3 Tags na faịlụ MP3 na ala
Olee otú ịchọta Lyrics akpaghị aka maka Songs
Ihe nile mkpa ka ị mara banyere iTunes n'ọbá akwụkwọ ọnọdụ
5 Atụmatụ mkpa ka ị mara maka otutu iTunes ọba akwụkwọ
Olee otú Idozi iTunes Library Easily na-akpaghị aka
Olee otú iji weghachi iTunes Library site na kọmputa jiri
Otú nyefee Playlist si iPhone ka iTunes on PC